September 21, 2021 N88LeaveaComment on दोस्रो विवाह ५५ घण्टा पनि नटिकेपछि तेस्रो विवाहको तयारीमा यी गायिका
एजेन्सी । अमेरीकी गायिका ब्रिट्नी स्पेयर्सले प्रेमी साम असगरीका साथ ईगेजमेन्ट गरेकी छिन्। ३९ वर्षिया ब्रिट्नीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेमीको साथमा रहेको एक भिडियो शेएर गर्दै ईगेजमेन्टबारे हालै जानकारी दिएकी हुन्। उनले आफूहरु छिट्टै विवाह बन्धनमा बाधिने समेत बताएकी छिन्। ब्रिट्नी र सामको पहिलो कुराकानी सन २०१६ मा म्युजिक भिडियो स्लम्बर पार्टीको शुटिङको क्रममा भएको थियो। […]
देउवा सरकारले घण्टाघर भत्काउँदै छ ?
September 21, 2021 N88LeaveaComment on देउवा सरकारले घण्टाघर भत्काउँदै छ ?
काठमाडौं । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट पटक-पटक आरोप लगाएका छन्, ‘धरहरा बनाएको देखेपछि अब घण्टाघर भत्काउने रे ! बिहीबार एक कार्यक्रममा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले यो सरकारले बनाउन नसक्ने भन्दै घण्टाघर नभत्काउन चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यिनीहरुले घण्टाघर बनाउँदैनन्, बेसरी गरे भने भत्काउने हो । म चुनौती […]
नेपाली कांग्रेसका डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सहमति, थप मन्त्री काे काे बन्दैछन् ?
September 21, 2021 September 21, 2021 N88LeaveaComment on नेपाली कांग्रेसका डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सहमति, थप मन्त्री काे काे बन्दैछन् ?
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति जुटेको छ । अब कांग्रेस सांसद नारायण खड्का मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार साँझ भएको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो । ‘सरकारको छवि धुमिल हुन नदिन परराष्ट्रमन्त्री तत्काल नियुक्त गरौं, अरु प्रमुख मन्त्रालयमा पनि मन्त्री […]
नेकपा एमालेले ल्यायो कठोर आचारसंहिता – यी पन्ध्र काम गरे हुन्छ कारबाही
September 21, 2021 N88LeaveaComment on नेकपा एमालेले ल्यायो कठोर आचारसंहिता – यी पन्ध्र काम गरे हुन्छ कारबाही
काठमाडौं । प्रमसख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीले मागेको बेला सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता–कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने नीति अघि बढाएको छ । यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुन लागेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताका लागि १५ बुँदे आचारसंहिता प्रस्तुत गर्न लागेको हो । प्रस्तावमा ‘पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको यथार्थ विवरण नदिई लुकाएर राखेर, झुठा […]
भारतले नेपाललाई किन धम्क्याएको थियो, ओलीले गरे यस्तो खुलासा
September 21, 2021 N88LeaveaComment on भारतले नेपाललाई किन धम्क्याएको थियो, ओलीले गरे यस्तो खुलासा
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले धम्क्याएको खुलासा गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना दूत एस जयशंकरमार्फत् संविधान पारित नगर्न धम्की दिएको ओलीले खुलासा गरेका हुन्। भारतीय अखबार द हिन्दुले यसबारे विस्तृत समाचार सार्वजनिक गरेको छ। उसले ओलीले आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा उल्लेख भएको […]
भीम रावलमाथि यसरी किन खनिए प्रचण्ड ? माकुनेकाे साथ छोड्नुको भित्री कुरा खोलिदिएपछि रावल तनावमा !
September 21, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावलमाथि यसरी किन खनिए प्रचण्ड ? माकुनेकाे साथ छोड्नुको भित्री कुरा खोलिदिएपछि रावल तनावमा !
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्टहरुको पोल खोलेका छन् । माधव नेपालको साथ छाडेका १० जना नेताले आत्मसमर्पण गरेकोमा अनौठो लागेको प्रचण्डले टिप्पणी गरेका हुन् । सोमबार सूर्यनाथ रान यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूहरुलाई दह्रोसँग […]
सरकारले देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेको ओलीको आरोप
September 21, 2021 N88LeaveaComment on सरकारले देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेको ओलीको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर देउवाले आफूले शपथ लिएको ७० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेर देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेको बताएका छन् । मंगलबार मदन भण्डारीको जीवनमा आधारित पुस्तक ‘श्वेतशार्दूल’ सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले ७० दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु मुलुकका लागि दूर्भाग्य भएको बताएका हुन् । उनले […]
ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दियाे यस्ताे आदेश !
September 21, 2021 N88LeaveaComment on ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दियाे यस्ताे आदेश !
काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको हो । सोमबारदेखि सुरु भएको बहस मंगलबार टुंग्याउँदै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगदेखि संसद्सम्मका सक्कल फाइल मगाउन […]
कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो
September 21, 2021 N88LeaveaComment on कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालततको यस्तो आदेशसँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन २७ मा शाक्यलाई हटाएर […]